“Waxaa mahad iska leh dadaallada samafaleed iyo dalagii ugu dambeeyay ee soo go’ay, kuwaasoo soo hagaajiyay xaaladda guud ee nafaqada tan iyo sanadkii hore. Laakiin, Soomaali badan ayaa weli la-daala-dhacaya inay daboolaan baahidooda aasaasiga ah, qiyaasaha soo baxayna waxay muujinayaan inay nafaqo-darridu ay cirka isku shareertay," ayuu yiri, Olivier Humbert Droz oo ah ku xigeenka madaxa ICRC).
Mr Droz oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri: “Intaas waxaa dheer, isku dhacyada hubeysan ee sii socda waxay ku qasbayaan dadka inay ka cararaan deegaankooda ama carqaleedayaan wax-soo-saarka cunnada iyo holwlaha kale ee dhaqaalaha.”
Sarkaalkan u hadlay ICRC wuxuu sheegay in roobabkii sannadkan ay bilhii Abriil iyo Juun ka yaraayeen heerkii caadiga ahaa, meelaha qaarkoodna aysan helin roob ku filan, isagoo xusay in tani ay khatar gelinayso awooddii qoysas badan ay ku tacban lahaayeen beerahooda ama ku dhaqan lahaayeen xoolaha nool si ay noloshooda u dabartaaan.
“Isku dhacyada hubeysan ee kasii socda Soomaaliya waxay kasii dareen xalaadda ka jirta deegaanno badan oo Soomaaliya ka tirsan,” ayuu yiri ku xigeenka ICRC oo soo saartay warbixintan.
Hay'adda ICRC waxay sheegtay in markii ay billaabatay abaartii sannadkii hore ay caawiyeen iyagoo kaashanaya ururka bishan cas ee Soomaaliyeed dad gaaraya illaa labo milyan oo qof kuwaasoo ay siisay raashin ku filan, iyadoo xustay in gargaarkan ay ka bixisay gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya iyo weliba Puntland.
“ICRC-da waxay ka jawaab bixinaysay baahida deg-deg ah iyo midda fog ee dalka Soomaaliya iyadoo fulinaysa mashaariic loogu tala-galay in lagu hagaajiyo nolosha iyo sugnaanta dhaqaale ee bulshooyinka ay aafeeyeen sanado badan oo dagaal iyo masiibooyin dabiici ah,” sidaa waxaa yiri isku-duwaha mashaariicda sugnaanta dhaqaale ee dalka, Maxamed Sheekh Cali. “Ujeeddadeenu waa inaan hagaajino isku filnaanshaha. Marka dhinca layska dhigo masiibooyinka dabiiciga ah, kuwa helay gargaarka waxay haysataan raashiin ku filan oo ay ku daboolaan baahidooda guri ee aasaasiga ah ugu yaraan lix bilood.”
Hay'adda ICRC waxay sheegtay in inkastoo cunno-qaybinta mar-mar loo baahan yahay si loo yareeyo dhibaatada dhow haddana ay caawiyaan bulshooyinka si ay u xoojiyaan ama u joogteeyaan taageeradooda.
Ugu dambeyn, hay'adda laan-qeynta cas waxay sheegtay in intii lagu jiray sanadkii tagay ay gargaarkeeda ka faa'iideysteen in ka badan 640,000 oo qof si kor loogu qaado wax-soo-saarka beeraha iyo xoolo la dhaqdo, iyadoo intaas ku dartay inay 200,000 oo qof siisay biyo nadiif ah.